Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee Ciidanka ONLF oo soo gaadhsiisay ONA 15 daggaal oo dhacay 2-dii todobaade u danbeysay
Xarunta Dhexe ee Ciidanka ONLF oo soo gaadhsiisay ONA 15 daggaal oo dhacay 2-dii todobaade u danbeysay
Posted by ONA Admin	/ June 18, 2013
Gaashaandhiga Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya JWXO ayaa soo gaadhsiiyay Wakaalada Wararka Ogadeniya s daggaalo ay la galeen ciidanka gumeysiga Ethiopia labadi todobadaad ee lasoo dhaafay ee Bisha June 02-12-15 June 2013.
Xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegtay dagaalo dhowr ah oo dhaxmaray cwxo iyo kuwa gumaysiga itootiya oo lagu jabiyay ciidamada wayaanaha. dagaaladan ayaa sida ay u kala horeeyeen idiin kuso gudbinayna
14/6/13 Xamarsamay oo qabridahare katirsan waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan.
12/6/13 Doofaaray oo Goday katirsan dagaal kudhaxmaray CJWXO iyo kuwa wayaanada waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 5 askari 4 kalana waalaga dhaawacay. Deegankan ayaa maalin ka hor dagaalkan halkaas Ciidamada JWXO iyo kuwa cadowgu isku haleeleen.
11/6/13 Doofaaray oo Goday katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh.
10/6/13 Calalacad oo dagmada Dhuxun katirsan dagaal adag oo kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/6/13 Calalacad oo Dhuxun katirsan waxaa marlabaad daggaal lagu dabo joogo firxadkii Ciidamada Woyanaha hadhaagiisii deegaankaas ku firidhsanaa lagu gaadhsiiyay cadowga khasaare balaadhan.
10/6/13 Goldhabilay oo Garbo katirsan waxaa ciidamada daalan ee woyaanaha loogugaystay khasaare aan faahfaahintiisa Wakaalada Wararka Ogadeniya (ONA) wali soo gaadhin.
09/6/13 ilkadawacada oo Fiiq katirsan waxaa ciidamada wayaanaha lagugaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa ONA wali helin.
09/6/13 Gujufka oo dagmada dhagaxmadow katirsan waxaa ciidamada cadawga lagugaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa ONA wali helin.
07/6/13 tuulada Farmadow oo katirsan dagmada Shaygoosh ee qogolka qoraxay dagaal mir ah oo ay kuqaadeen Ciidamada JWXO kuwa gumaysiga oo halkaas kusugnaa waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aad u xoogan oo naf iyo maalba leh.
06/6/13 Shinbiralay oo dagmada Dhuxun katirsan dagaal kudhexmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
06/6/13 Saax-dhabilay oo Goday katirsan waxaa cadawga lagugaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin ONA soo helin.
06/6/13 Maygaag-wayne oo Fiiq katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo naf iyo maalba leh.
05/6/13 Haardhagax oo dagmada Fiiq ee xarunta gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa ONA helin wali.
04/6/13 Haar dhagax oo Fiiq katirsan waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaar balaadhan oo aan faahfaahintiisa ONA helin.
02/6/13 Ogobi oo Galaalshe katirsan waxaa ciidamada cadawga lagugaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa ONA soo gaadhin.